Nhau - Ungachengeta sei diki rekuchera uye bhagidhi
Ungachengeta sei diki rekuchera uye bhagidhi
Kugadzirira usati washandisa iyo yekuchera
1. Kuongororwa kwemafuta matatu uye imwe mvura: hydraulic mafuta, injini yemafuta uye dhiziri kuongorora mafuta, kunyanya hydraulic mafuta uye injini injini, izvo zvinofanirwa kusangana nematanho anotsanangurwa nemugadziri. Iyo inotonhorera inofanira kunge iri munzvimbo yakazara, uye tarisa iyo inotonhorera system kuti idonhe.
2. Panenge paine girizi (bota) rinoda kuwedzerwa, girizi rinofanira kuzadzwa zvizere.
3. Tsvina nemarara ari mukati memunhu anokambaira anofanira kucheneswa zvakanyanya. Mushure mekuchenesa, tarisa kusagadzikana kweiye anokambaira uye wedzera girizi zvinoenderana neyero kuti uve nechokwadi chekushandisa chaiko kwenzira yekufamba.
4. Kana mazino ebucket nemazino emumativi akasakara zvakanyanya, anofanirwa kutsiviwa nenguva kuti ave nechokwadi chekuchera simba remugadziri.
(2). Nzvimbo dzinofanirwa kucherechedzwa mukushandisa kwezvicherwa
1. Mushure mekunge excavator yatanga, rega injini imhanye nespidhi inomhanya uye isina mutoro kwenguva yakati (kureba kwenguva kunoenderana netembiricha), uye mirira kuti tembiricha yeinjini iwedzere zvakanaka usati waita kuchera kwakakura. .
2.Kusati kwafukunurwa, zviito zvese zvakajairika zvechechera zvinofanirwa kuitwa zvisina mutoro kuti zviongorore ruzha rwusina kujairika uye chimiro chisina kujairika.
3. Pakuchera, mupfuuri anofanirwa kushandisa zviito zvine musoro uye zvakajairika zvekuchera kuti ave nechokwadi chekuchera simba remugadziri, uye zvakare kuderedza kurasikirwa kwakajairika kwezvikamu zvemuumbi.
4. Kana iyo yekuchera iri kushanda ichienderera kwenguva yakareba, inofanira kutarisa system yega yega, kunyanya kugadziriswa kwezvikamu zvemukati, kucherechedza zvikamu zvinoda kuzorwa mukati meimwe nguva, uye girizi rinoda kuwedzerwa ( inokurudzirwa kutarisa uye kuwedzera maawa mashanu kusvika matanhatu).
5. Panyaya yemamiriro ekushanda akashata (sludge, masora, ivhu, nezvimwewo), marara anofanirwa kucheneswa mukati menguva kuona kuti mashandiro eakawanika, kunyanya injini ndiyo chikamu chikuru, uye hapafanire kunge paine marara akakomberedza injini kuti ave nechokwadi Neyakajairika kupisa kupisa kweinjini.